दलीय गुटको दलदलमा पूर्वप्रहरी संगठन : भन्ने पूर्वप्रहरीको हित, गर्ने पार्टी राजनीति !
नारायण अधिकारी मंगलबार, माघ १३, २०७७, ०९:४७
काठमाडौं- ‘पूर्वप्रहरी संगठन कसैको बपौती होइन, सम्पूर्ण पूर्वप्रहरी कर्मचारीको चौतारी हो। जहाँ सबैलाई शीतलता होस्,' नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) पूर्ण खड्काले गत शनिबार सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे।
उनको आक्रोशले प्रष्ट बोलेको छ-कसैले संगठन एकलौटी रुपमा चलाएको छ। कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरिएको छ।
पूर्व डिआइजी खड्काले सार्वजनिक रुपमा आफ्नै संगठनविरुद्ध यसरी लेख्नुपर्ने अवस्था किन र कसरी आयो? खड्काले भनेजस्तै साँच्चै कसैको बपौती बनेकै हो पूर्वप्रहरी संगठन? वा उनको यो निराधार आरोप मात्रै हो? साढे दुई दशकअघि स्थापना भएको पूर्वप्रहरी संगठन विरुद्ध सार्वजनिक रुपमै प्रकट भएको आरोप-प्रत्यारोपको कारण के हो?
दलीय गुटको दलदल
पूर्वप्रहरी संगठनको एउटा भाइबर ग्रुप छ, जहाँ करिब तीन सय जना सदस्य छन्। करिब १५ दिन अघिदेखि त्यो ग्रुपबाट केही सदस्यलाई निष्काशन गर्नेदेखि केही नयाँ सदस्यलाई ज्वाइन गर्ने काम भइरहेको छ।
ग्रुपबाट निकालिएका एक पात्र हुन्, पूर्व डिएसपी प्रेमबहादुर कार्की। कार्कीलाई ग्रुपबाट निकालिएपछि पूर्वप्रहरी संगठन टीकापुर, कैलाली शाखाले विज्ञप्ति निकालेर पुनः ग्रुपमा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।
नयाँ मान्छे जोडिनु र निष्काशन गर्नुको पछाडि जोडिएको छ, संगठनको १०औं साधारणसभा। काठमाडौंको धापासीस्थत आफ्नै भवनमा पुस २९ गते संगठनको १०औं साधारणसभा समपन्न भएको थियो।
९औं साधारणसभाबाट निर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्ष, पूर्वएसएसपी बसन्त कुँवर (दसौं साधारणसभाबाट पनि) दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। साधारणसभाले उनीसहित १८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्‍यो।तर, यो साधारणसभापछि भने सार्वजनिक रुपमै टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ। गुटगत भेला गरेर संगठन पार्टीलाई बुझाएकोसम्म आरोप लागेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आएको फुटको असर पूर्वप्रहरी संगठनको १०औं साधारणसभामा देखिएको त्यहाँ सहभागी एक पूर्वप्रहरी अधिकृतले नेपाल लाइभलाई सुनाए।
त्यसो त पूर्वप्रहरी उद्धव भारतीले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका छन्, ‘यी सबै पार्टीका भरौटे भए। संगठन पार्टीमा बुझाए।’
आफ्नो पक्षका सीमित सदस्यहरुलाई मात्र जानकारी दिएर साधारणसभा गरेको र पुनः दोस्रो पटक ‘स्वोघोषित अध्यक्ष’ बनेको आरोप कुँवरमाथि लागेको छ।
भारती भन्छन्, ‘म पनि पूर्वप्रहरी संगठनको आजीवन केन्द्रीय सदस्य हुँ। तर गुटको भेला गराएर साधारणसभाको नाम दिई टीका लगाउने काम पुस २९मै समाप्त गरिसकेछन्। म जस्तै धेरैलाई सायद थाहा भएन होला।’
अध्यक्ष कुँवरको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको चपेटामा पूर्वप्रहरी संगठन परेको एक पूर्वप्रहरी अधिकृतले आरोप लगाए। उनको सुरुदेखिकै महत्वकांक्षाको असर अहिले पूर्वप्रहरी संगठनमा देखिएको उनको भनाइ छ।
ती पूर्वप्रहरी अधिकृतले कुँवरको महत्वाकांक्षा विश्लेषण गर्न २०७३ सालमा फकर्नुपर्ने बताए। २०७३ सालमा कुँवरले अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरु जम्मा गरेर नेपाल पूर्व राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका थिए, जहाँ सबैजसो अवकाशप्राप्त सुरक्षा अधिकारी थिए। पार्टीको अध्यक्ष भने पूर्वडिएसपी चुडादेव सिंह लामा बनेका थिए। गठन भएको एक वर्ष नबित्दै उक्त पार्टी तत्कालीन एमालेमा समाहित भयो। रोचक के छ भने पार्टी गठनदेखि विलयसम्मको नेतृत्व कुँवरले गरेका थिए।
उनको त्यसबेलाको महत्वाकांक्षा पूरा हुन नसकेको चर्चा हुने गर्छ। अहिले नेकपा फुटेर (कानुनी रुपमा फुट्न बाँकी) दुई पक्षमा विभाजित भएपछि कुँवर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेको र आफूनिकटलाई भेला गरेर दास्रो पटक संगठनको अध्यक्ष बनेको आरोप लागेको छ।
ती पूर्वप्रहरी अधिकृतले भने, ‘सबै सदस्यलाई साधारणसभामा बोलाउनुपर्ने हो। तर त्यस्तो भएन। ओली समूहमा संगठन बुझाएपछि आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा हुने देखेर कुँवरले गुटको भेला गरेर अध्यक्ष बनेको हुन्।’
जानकारीबेगर साधारणसभा गरिएकोबारे पूर्वडिआइजी खड्काले नेपाल लाइभलाई सुनाए, ‘म दाङमा थिएँ। एक जना मेरा मित्रले साधारणसभा छ भन्ने कुरा २८ गते सुनाएपछि बल्ल थाहा पाएँ। करिब तीन सय जना भाइबरमा जोडिएका होलान्। संगठनका हरेक अपडेट त्यहाँ हुन्थ्यो। तर साधारणसभाका बारेमा कुनै जानकारी त्यहाँ हालिएन। त्यो सूचना किन लेखिएन, कुँवर नै जानून्।’
यसबारे नेपाल लाइभले जिज्ञासा राख्दा कुँवरले भने, ‘यो सबै हावा कुरा हो।’ पार्टी विभाजनकै बेलामा साधारणसभा सम्पन्न भएकाले केहीलाई त्यस्तो लागेको भए पनि त्यसमा सत्यता नरहेको दाबी कुँवरको छ।
‘गुटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पुलिस अफिसरमा बहालवालादेखि नै गुट–गुट छन्। भूतपूर्व हुँदा पनि त्यो गुट रहने नै भयो’, कुँवरले भने।
भन्ने पूर्वप्रहरीको हित, गर्ने गुटगत राजनीति?
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) मोतीलाल बोहराको पालामा पूर्वप्रहरी संगठन दर्ता भएर सक्रिय बनेको थियो। धापासीस्थित ७ रोपनी जग्गासमेत आफ्नो नाममा ल्याएर सुरु गरिएको संगठनले पूर्वप्रहरीको हितमा काम गर्ने बताइएको थियो। सोही अनुसार संगठनको विधानसमेत निर्माण गरिएको थियो।
प्रहरी हितका लागि काम गर्ने संगठन भनिएकाले तत्कालीन आइजिपी बोहराले १२ लाख, ध्रुवबहादुर प्रधानले ३४ लाखलगायत अन्य पूर्व आइजीपी र पूर्वप्रहरी ले ठूलो रकम सहयोग पनि गरेका थिए। प्रहरीको हितका लागि भनेर गठन भएको संगठन अहिले एक प्रहरीले अर्को प्रहरीलाई खुइल्याउनमा केन्द्रित भएको आरोप लागेको छ।
यसको विवाद सार्वजनिक रुपमै देखापरेको छ। एकअर्कालाई खुइल्याउन र गुटगत राजनीति गर्न थालेको भन्दै संगठनबाट बाहिरिने क्रम पनि जारी छ। पूर्वडिआइजी खड्का आफू पूर्वप्रहरी सगठनबाट बाहिरिएको बताउँछन्। ‘चाटुकार संगठनमा बस्नुभन्दा बाहिरिनु ठिक लागेपछि बाहिरिएको हुँ’, उनले नेपाल लाइभसँग भने।
खड्का अहिले असन्तुष्ट भएर निस्किए पनि उनीभन्दा पहिल्यै पूर्वएआइजी डा गोविन्दप्रसाद थापा, अनन्तराम भट्टराई, श्यामसिंह थापा, दीपेन्द्र विष्टलगायत संगठनबाट बाहिरिइसकेका थिए।
यसअघि एकलौटी रुपमा संगठन चलाएको भन्दै एक समूहले पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषदसमेत गठन गरेको थियो। अहिले परिषद् पनि अस्तित्वमा छ।
पूर्वप्रहरीको हितमा काम गर्ने भनेर गठन भएको संगठन नै राजनीतिक दल जस्तो भएपछि त्यहाँ जानु ठीक नलागेर आफू अहिलेसम्म नभएको पूर्वआइजिपी अच्युतकृष्ण खरेल बताउँछन्। ‘पूर्वप्रहरी संगठन कुनै राजनीतिक दल हो र? दुई/तीन वटा हुनलाई?’, खरेलले नेपाल लाइभसँग भने, ‘जहिलेसम्म तिमीहरु एक हुँदैनौ, त्यस बेलासम्म संगठनमा आउँदिन भन्देको छु। अहिलेसम्म गएको पनि छैन।’
कुँवर भन्छन्- सईलाई नमस्कार गर्न लाज मान्नेले आलोचना गरे
सत्य के पनि हो भने, पूर्वप्रहरीहरुमा पनि अनेक गुट छन्। हाम्रा पनि आफ्ना इस्युहरु छन्। त्यसैमा यताउता भएको हो।पूर्वप्रहरीहरुको एउटा भाइबर ग्रुप छ। त्यो ग्रुपमा उनीहरुले आफ्नो विचार, धारणा लेख्छन्। धारणा राख्ने नाममा कसैले जथाभावी लेखेर ग्रुपलाई पोलुटेड बनाएको अवस्थामा ग्रुपबाट निकाल्ने चलन छ। यसले ज्यादै नै गर्‍यो, ग्रुपमा राख्नु भएन भन्ने लागेपछि निकाल्ने चलन छ। अहिले ग्रुपबाट मलाई निकाल्दिए भन्ने गुनासो छ, यसको कारण यही हो।
अहिले जति पनि आलोचना गरेका छन्, उनीहरुलाई अनुशासनहीन काम गरेकाले निकालिएको हो। हाम्रो ग्रुपमा हाम्रै विरुद्ध लेखेपछि पूर्वप्रहरीको महत्व त भएन नि।
आफ्नो गुटको भेलामार्फत् साधारणसभा गर्‍यो भन्ने आरोप लगाइएको छ। त्यो हुँदै नभएको कुरा हो। साधारणसभाबारे पत्रिकामै सूचना निकालिएको थियो। सारा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मान्छे पनि आएकै हुन्। जसलाई जानकारी दिन जरुरी नै छैन, उसलाई किन जानकारी दिनु पर्‍यो र? म आजीवन सदस्य हुँ भनेर मात्रै हुन्छ र? आजीवन सदस्य नै भए पनि जिल्लास्तरीय भेलामा पो सहभागी हुन्छन् त। यो त केन्द्रीयस्तरको भेला हो नि। यसमा केन्द्रीयस्तरका पदाधिकारी र जिल्ला अध्यक्ष मात्रै सहभागी हुन्छन्। यीबाहेक अरुलाई जानकारी हुन आवश्यक छैन।
हाम्रो संगठनमा सबभन्दा तल वडा इकाई हुन्छ। आजीवन सदस्यहरुले भोट हालेर इकाई बनाउँछन्। कोही पूर्वप्रहरी संगठनको सदस्य बन्नु पर्‍यो भने सुरुमा वडा इकाईमा जानु पर्‍यो। इकाईका पदाधिकारीले जिल्लाका पदाधिकारी चयन गर्छन्। जिल्लाका पदाधिकारीले प्रदेशका पदाधिकारी तोक्छन्।
प्रदेश पदाधिकारीहरु, जिल्ला अध्यक्षहरु, केन्द्रीय सदस्यहरुले केन्द्रीय अध्यक्ष चुन्ने हो। त्यसकारण केन्द्रीय अध्यक्षको निर्वाचनमा सबै सदस्यलाई जानकारी हुन आवश्यक छैन।
पूर्वप्रहरी संगठनमा अफिसरहरुलाई चुनाव जित्न गाह्रो छ। ७७ जिल्लामध्ये सबैजसो जिल्लाका अध्यक्ष सईभन्दा तल्लो दर्जाका पूर्वप्रहरी छन्। चुनावमा त सईलाई नमस्कार गरेर भोट माग्नु पर्‍यो। सईलाई नमस्कार गर्न लाज मान्नेले अहिले आलोचना गरेका हुन्।
भागरथी हत्या : फरक–फरक बयानको ‘क्लु’ले डाेर्‍याएको सफल अनुसन्धान
अज्ञात रोगका कारण जयपृथ्वी नगरका दुई वडा प्रभावित उनका अनुसार गाउँमा वृद्धवृद्धा र बालबालिकामा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ। बिरामीमा ज्वरो आउने, रिङ्गटा र वाकवाकी लाग्ने, खाना नरुच्न... शुक्रबार, फागुन १४, २०७७
१८ डिएसपीको सरुवा सरुवा सूची अनुसार इन्द्रबहादुर रानाको इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगर टाँडी चिवतन, कुमार विक्रम थापाको बागमति प्रदेश प्रहरी कार्यालय ह... शुक्रबार, फागुन १४, २०७७